အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဒေါ်သစ်က ဖြိုသလစ်ဆိုတော့ တီချမ်းကလဲ “ဖြစ်သလို”
ကဲ အဲ့တော့ သူ့ ကို လက်စားချေတဲ့ အနေနဲ့ ဘာချက်ကြွားအဲလေ ဘာချက်ကျွေးရမလဲ စဉ်းစားတော့ တီခုတလော ချက်နေတာ မြန်မာဟင်းတွေ ဆီပြန်(ဆီပျံ- မဟုတ်ပါ credit to Rita ever green မသိရင် ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးလိုလိုနော် နာမည်က ပြောပါတယ်)တွေများနေတာမှလား အဲ့တော့ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် အားလုံးကို ခုတခါ တရုတ်စာ ချက်ကျွေးမယ် စိတ်ကူးပါတယ် အဲ့တာနဲ့ ဘာချက်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတော့ တခါမှမချက်ကျွေးဘူးသေးတဲ့ နံရိုး ကြံမဆိုင် ကိုသတိရပါတယ် တနေ့ကလဲ စီယမ်ပါရာဂွမ်(siam paragon) ကိုရောက်တော့ ကြံမဆိုင်တွေတွေ့တာ ကောင်းမယ့်ပုံရတာနဲ့ ဝယ်လာတာရှိပါတယ် (ဘာနဲ့တွဲမယ်ထင်လဲ အသားဟင်းကို ပြောပြဘူးနော် အောက်အထိဖတ်) အဲ့တာနဲ့ ကြံမဆိုင်ဖတ်လေးတွေ ကိုအနေတော် အတုံးလေးတွေလှီး (ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ mae နဲ့မေတဲ့ ဒေါ်မေ ပြောပါအုံးမယ် လှီးနည်းပါသင်ပေးတယ်လို့.... ချက်ရင်လွယ်စေချင်တဲ့စေတနာပါ ရပါစေ နောက်တယောက် ခိခိခိ) နံရိုး (ရှယ်နံရိုးရွေးဝယ်ပါ အရိုးနည်းနည်းအသားများများနော် မဟုတ်ရင် စားမကောင်းဘူး) နဲ့ တီကတော့ သုံးထပ်သားလေးပါ နည်းနည်းထည့်ပါတယ် အဲ့တာမှ ဟင်းရည်ကျက်တဲ့အခါကျရင် ဆီလေးပါနည်းနည်းလေး မဆိုစလောက် စားကောင်းရုံဝေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လှီးချွတ်ပြီးသား ကြံမဆိုင်ရွက်တွေနဲ့ ရေစင်စင်ဆေးထားတဲ့ နံရိုး နဲ့ သုံးထပ်သားတွေ ကို ချက်မယ့် အိုးလေးထဲ အသင့်ထည့် ရေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ တည်ပါမယ် ပုံပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ပါ။ စပြုတ်တဲ့အခါကတည်းက ဂျင်းဖတ်ခတ်ကြီးကြီး ကို ဓါးပြားရိုက်ပြီး တခါတည်းထည့်ပြုတ်ပေးပါ ဒီနေရာမှာ ဆားအချိုမှုန့် မထည့်သေးပါဘူး
ကဲပါ ဟင်းစချက်ကြရအောင်နော်...ပထမဆုံး ပါးပါးလေးလှီးထားတဲ့ အသည်းလေးတွေကို ဟင်းချက် ကော်မှုန့် နဲ့နယ်ပါမယ်
ဒါကတော့ အသင့်စိမ်ပြီးသားဈေးလမ်းကနေဝယ်လာတဲ့ မာလကာသီးနဲ့ ဇီးဖြူသီးပါ မာလကာ သီးအကြောင်းနည်းနည်းပြောပါမယ် မာလကာ သီးက ဆေးသကြားရည်နဲ့ စိမ်ထားပါတယ် ပြီးတော့ သူ့ကို တို့စားရမယ့် ဆား/သကြားကတော့ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ ပန်းနုရောင်လေးပါ အဲ့တာလေးက မက်မုံသီးစေ့နဲ့ လုပ်ထားတာပါ ဒီလိုစိမ်ထားတဲ့မာလကာ နဲ့ အင်မတန်မှ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဇီးဖြူသီးကတော့ သိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး ရိုးရိုးပါပဲ ဆားကလဲရိုးပါတယ် ဆား+အချိုမှုန့်+ ငရုတ်သီးမှုန့်ပါပဲ (ကြုံလို့ပြောပါအုံးမယ် ဇီးဖြူသီး နဲ့ဖန်ခါသီး ကိုလူတော်တော်များများမှားကြပါတယ် ဇီးဖြူသီးက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ အင်း.....ရွှေဖရုံသီးအသေးလေးလိုပါပဲ ဘေးနားမှာ အထစ်ကလေးတွေပါပါတယ် ဖန်ခါးသီးကတော့ လုံးချောပါ ဂေါ်လီလုံးလေးတွေလိုပေါ့) နှစ်မျိုးစလုံးကတော့ အစိမ်းစားပြီးရေသောက်ရင် ချိုပါတယ်။ ရှင်းတယ်နော် ခိခိ
ခုတော့ ကြိုက်သလောက်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဝယ်စားမယ် ဒါပဲ....သရက်သီးကလဲ နှစ်မျိုးပါ ထောင်နေတဲ့အလုံးလိုက်က အချိုပါ တီကတော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး အိမ်သား(အိမ်သူမဟုတ်ပါ) က ကြိုက်လို့ အမြဲထည့်ဝယ်တာပါ
ကော်ဖီကတော့ တီ့အကြိုက် ပရီ............မီ..........ယား (ဖြူဖြူကျော်သိန်း အသံဖြင့် အော်၍ဖတ်ရန်)
Posted by တီချမ်း at 4:51 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အချိုပွဲ, အသားကြော်, အသုပ်များ
Rita November 7, 2009 at 8:20 AM
(အဲ့ဒီ စေတနာတွေ ကြောင့် လင်ကောင်းသားကောင်း များများ ရပါစေဘုရား)
အများကြီး ဘာလုပ်ဖို့လဲ ???
အန်တီချမ်းပါ November 7, 2009 at 12:24 PM
အများကြီးဆိုတော့ ထည်လဲသုံးလို့ရတာပေါ့ အဟိ
တခါတလေ လဲ မုန့်ဟင်းငါး တခါတလေလဲ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပေါ့အေ
jr.lwinoo November 7, 2009 at 1:44 PM
coffee က အစာပိတ်ပါ။
အန်တီချမ်းပါ November 7, 2009 at 1:48 PM
jeujue: အေးပေါ့အေ...အေးပေါ့အေ...စားကြပေါ့အေ...နာလိုဘူးအေ့...ဒါပဲအေ့. (ကလေးတွေရန်ဖြစ်ရင်ပြောသလိုဖတ်ပါ)
little brook November 7, 2009 at 3:02 PM
ဟေဟေ့ တီ့ဆီကချက်နည်းတွေထဲ အသဲကြော်ကို အကြိုက်ဆုံး .. ခုနည်းသိသွားပီ .. ကြော်စားဦးမှ .. သရိုးသရီလေးတွေကော စားသွားတယ် ... ဟားဟား အဲ့သရိုးသရီဆိုတာ မပြောရတာကြာပေါ့ :)
သစ်သစ် November 7, 2009 at 7:32 PM
တီချမ်း ညည်းအေ ရက်စက်ချက်က ကမ်းကုန်တယ်... ကျုပ်က တနေ့လုံးမအားလို့ ညမှရောက်တာကို ဒီလိုမျိုးနှိပ်စက်ရက်တယ် ..နက်ဖြန်ကျရင်တော့ ကျုပ်ဘလော့ကို ခဏတဖြုတ် ၀င်ဖြစ်အောင်ဝင်နော့....
naychi November 9, 2009 at 8:55 AM
အဲဒီကျမှတော့ ထွက်မပြေးနဲ့နောင့် ဟွင့်
may November 9, 2009 at 9:25 AM
ရှလွတ် ရှလွတ် ရှလွတ် (သားရည်သိမ်းသံ)
မိရွှေသစ် တီချမ်းဆီက နည်းယူပြီး ချက်တော့မယ်ပေါ့ ဖုကောဒ့်ရုပ်မပေါက်အောင်
တီချမ်း နံရိုးကြံမဆိုင်ဟင်းအတွက် (တယောက်ရပါစေ)
အသည်းစားကြီး တီချမ်းရဲ့အသည်းဟင်းအတွက် (တယောက်ရပါစေ)
အချဉ်လေးတွေ ရှလွတ် ရှလွတ် ဆီဖြူသီးလေးတွေအတွက် (တယောက်ရပါစေ)
ပုစွန်ခြောက်နန်းခြင်းနဲ့လက်ဖက်သုတ်လေး (ရှလွတ်) အတွက် (တယောက်)
လက်ဖက်သုတ်လေးကို လှလှလေးလုပ်ထားပေးတဲ့အတွက် နောက် တယောက်
ကော်ဖီနဲ့ ပေါင်မုန့် မီးကင်အတွက် (နောက်ထပ်တယောက်)
ဟင် များသွားပြီ များသွားပြီ ပြန်လျှော့မယ် ပြန်လျှော့မယ်
လက်ဖက်သုတ်ကို လက်အိတ်မသုံးပဲ သုတ်တဲ့အတွက် (တယောက်ပြန်လျှော့)
စတော်ဘယ်ရီယိုကို ပေါင်မုန့် ပေါ်မသုတ်ပဲ ကလေးကလားဆော့တဲ့အတွက် (တယောက်ပြန်လျှော့)
သရက်သီးစိမ်းကိုပြပြီး သားရည်ကျအောင်လုပ်တဲ့အတွက် (နောက်တယောက်ပြန်လျှော့)
ဟင်းချက်နည်းရေးတာကို ကြော်ငြာဝင်တဲ့အတွက် (အိမ်သား(အိမ်သူမဟုတ်ပါ) (နောက်တယောက်ထပ်လျှော့)
ကလေးတွေရှေ့ မှာ မီးနေသည်တွေ နို့ ပိုထွက်အောင်လို့ရှက်ရှက်တွေ ပြောတဲ့အတွက် (နောက်တယောက်ပြန်လျှော့)
ပြောတော့ စေတနာတဲ့ ဟွန့်ဟင်းလေး ၂ မျိုး လက်ဖက်သုတ်လေး၁ ပွဲ အချိုပွဲ အချဉ်ပွဲလေး ၃ ပွဲံလောက်နဲ့ တောင်းတဲ့ဆုက များများရပါစေတဲ့ ဒါ စေတနာထက် လိုချင်နေတာများတယ် ဒါကြောင့် နောက် ၁ ယောက် ထပ်လျှော့တယ်ဟယ်
ဟင် အနုတ် မိုင်းနပ်ပြသွားပြီ တီချမ်းတော့ အဟိဟိ
ခုမှ မူလ လက်ဟောင်း ဓနုဖြူ ဒေါ်ရီစော လမ်းမတော် ဒေါ်ရီးကြိတ် တွန်းလှည်း မစုချစ် မာရိုးအေ ကော်ဖီ ဆိုင်ရှင် အနုတ်ကြီး တီချမ်း
may November 9, 2009 at 9:26 AM
ဟင် ဖလား ဖလား ဒီမှာလည်း အရှိန်လွန်ပြီး မန့် တာလွန်သွားပြီ ပြေးမှ
ဂျူနို November 9, 2009 at 6:36 PM
လက်ဘက်သုတ်လေး စားချင်တာနော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ။
sweetpeony November 10, 2009 at 4:05 PM
tarkarshi.sarko@gmail.com December 6, 2009 at 10:58 PM
အန်တီချမ်းရေ တာကာလာဖတ်ပြီး ကြွေသွားတယ်။